F8 developer conference ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Instagram ကြယ်ပွင့် Jiff Pom – AsiaApps
F8 developer conference ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Instagram ကြယ်ပွင့် Jiff Pom
May 3, 2018 May 3, 2018 MoonApp NewsNo Comment on F8 developer conference ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Instagram ကြယ်ပွင့် Jiff Pom
Jiff Pom က လူမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ IG (Instagram) ရဲ့ ကြယ်ပွင့် ခွေးလေးတစ်ကောင်ပါ။ ခွေးဆိုပြီးတော့ တော့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့နော်။ သူ့ရဲ့ ကံဇာတာက မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို ထူးကဲပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ facebook ရဲ့ F8 conference မှာ Instagram ရဲ့ reality filters အသစ်ကို မိတ်ဆက်တုန်းက Mark Zuckerberg ကသူ့ရဲ့အကူအညီယူခဲ့ရတာပါ။ (wow!!! Jiff Pom ရဲ့ပါဝါကတော်တော်ကြီးတာပဲ…။ ) Jiff Pom အကြောင်း ထပ်ပြီး သိချင်ရင်တော့ ဆက်လက်ဖတ်ရှုသွားပေးပါနော်။
Jiff Pom က လော့အိန်ဂျလိစ်မြို့ရဲ့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်/မော်ဒယ် ခွေးလေးတစ်ကောင်ပါ။ သူ့မှာ social media channel တွေရဲ့ follower ၂၆သန်းရှိပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အလုပ်က နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့CEO တွေ ၊ ချောမောလှပတဲ့ ဆယ်လီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပေးရတာပါ။ ပုံထဲမှာတွေ့ရတာက ဘရာဇီး makeup artist Mariana Saad နဲ့ အတူဖြစ်ပါတယ်။
Essa éa@marisaad uma das influenciadoras de beleza mais famosas do Brasil ?
A post shared by jiffpom ? (@jiffpom) on Apr 18, 2018 at 7:25pm PDT
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ follower ၈.၄သန်းနဲ့ IG ရဲ့ follower အများဆုံး animal အဖြစ် ကမ္ဘာ့ စံချိန်ချိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့တုန်းကလည်း F8မှာ Instagram ရဲ့ AR Camera Effect platform အသစ်အတွက် ကူညီခဲ့ပါတယ်။ Filter တွေဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို ယဉ်ကျေးစွာ သရုပ်ပြပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Instagram star @jiffpom takes the stage at #F8 to share new Instagram #AR filters. With Camera Effects Platform expanding to Instagram, user created AR filters will appear in cameras of followers. Effects will also be discoverable and shareable among fri… https://t.co/jGvWIdnK3n pic.twitter.com/g4MbwhYNZu
— Ben Smith (@benasmith) May 1, 2018
Jiff Pom က မီးမောင်းတွေနဲ့လည်းမစိမ်းပါဘူးတဲ့။ အဲ့တာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလတုန်းက ဂျာမနီနိုင်ငံ Game Con မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Entertainment Art ရဲ့ Sims4: Cats and Dogs game မိတ်ဆက်ပွဲမှာ လည်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
Star of the show! Just helped @ea announce #TheSims4 Cats & Dogs at #gamescom Germany – can’t wait for it to come out on November 10th ??? #sponsored
A post shared by jiffpom ? (@jiffpom) on Aug 21, 2017 at 12:20pm PDT
သူလေးက ကြော်ငြာတွေကိုလည်း လက်ခံပါတယ်တဲ့။ �� Kattery Parry ရဲ့ “Dark Horse” ထဲမှာလည်း အရမ်းကို နာမည်ကြီးခဲ့ တာနော်။ (ဆယ်လီလေးကို နည်းနည်းမှတ်မိလာပြီ မဟုတ်လား။)
အဲ့တာတွေတင်မကသေးပါဘူး Nickelodeon ရဲ့ People Choice Award ဆုကို Favorite Instagram Pet in March အတွက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဖက်ရှင်အမြင် ကတော့ အခြားသက်ရှိသတ္တဝါတစ်ကောင်လိုမျိုး ဖြစ်သွားစေမယ့် သားမွေး အင်္ကျီတွေ ဝတ်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်တဲ့။
A post shared by jiffpom ? (@jiffpom) on Oct 29, 2016 at 4:10am PDT
Wow!!! ဘယ်လိုတောင် ကံကောင်းတဲ့ ခွေးလေးလဲ။
ဘယ်လိုလဲ ဘော်ဘော်တို့ရေ Jiff Pom ရဲ့ ဘဝကို အားမကျကျဘူးလား။ အခုဖတ်ရင်းနဲ့ Jiff Pom
လေးကို ချစ်မိသွားရင် IG မှာ jiffpom ဆိုတဲ့ အကောင့်လေးကို သွားပြီး follow နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Jiff Pom နဲ့ ဘဝချင်းကွာတဲ့ Bff တွေကို Mention ခေါ်လိုက်ကြရအောင်နော်… ?)
အသုံးဝင်တဲ့ iPhone tips အချို့ကိုသင်သိပြီးပြီလား ?
U12+ ကိုမေလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်သွားမယ့် HTC